Indlela yokwenza ityuwa i-rozhiki ebusika kwiindawo zokutshisa kunye nokubandayo, nge-brine. Indlela yokuthambisa i-ryzhiki ebusika
NgoSeptemba ngokuqhelekileyo kuthathwa njengenyanga yenyanga yee-mushroom billets. Nelisekile "abazingeli" ngoku kwaye babuyise ikhaya elipheleleyo lokuvuna, kwaye emva - cinga ngendlela efanelekileyo yokuyihambisa etafileni zasebusika. Yaye kunye neentlobo zeenqabana, okwangoku, izinto ezininzi: ama-mushroom omisiwe, adibeneyo, aqhotyoshelwe, atyisiwe, anetyuwa ... Ikhetho lokugqibela liza kuqwalaselwa ngokubanzi kwaye sifunde ukuba njani ityuwa i-rozhiki ebandayo nokutshisa indlela, kwiindimbi ezine-brine, njl njl.
Ngayiphi indlela ityuwa intlanzi ebusika - iintlobo ezininzi ze-brine
Ngokuqinisekileyo, inkqubo enqabileyo kakhulu ekuvuneni izibhakabomvu ezibomvu ebusika kukuhamba emva kwabo ehlathini lehlathi. Ukuchitha ixesha lokusebenza kunye nemvakalelo emihle ayikwazi ukunceda kodwa. Kodwa emva koko kulandela isigaba eside kunye nesigxina sokuhlenga, ukucoca kunye nokucoca uvimba buncwane. Ukuba ukwazi ukuqokelela kuphela i-redheads, cinga inhlanhla. Kodwa ukuba kuqokelelwe kwiindidi zakho iintlobo zama-mushroom, ukuhanjiswa kwazo ngeentlobo kuza kuthatha ixesha elide. Ekubeni ama-specimens endala abe buhlungu kwaye ekhuni emva kokucoca, kufuneka ahlale esele. Ukukhethwa, khetha i-fungi nje encinci kwaye inamandla. Yicacise ingcola kwaye ushiye, uhlanjululwe ukutshitshiswa kweentsimbi. Ubunzima obomvu abuqukethe umthamo omkhulu wejusi, kwaye ngoko akudingeki ukuba unyuke. Kuhleli ukuba kuthathe isigqibo sokuba yini ityuwa ebusika. Namhlanje, iindlela ezintathu eziphambili zithandwa, apho kunokwenzeka ukucoca iintlanzi:
ukuchithwa ngokucokisekileyo kwendlela yokugubha ngetyuwa kunye neziqholo ngokuqhubeka nokugcina ubunzima ngaphantsi komshicileli;
amakhowe atshisayo atshisayo kwi-brine aze ajikeleze kwiimbiza;
intlanzi egalelayo - ithambisa iinhlanzi ngesisombululo se-salt saline ngaphandle kokunyangwa kwelanga.
Kutheni i-rozhikov i-salted ebusika ingcono - zigqibo ngokwakho, emva kokuhlola zonke iindlela ezidumile. Ukongezelela, akukho ziqhamo ezininzi zamakhowe!
Indlela yokotyulela i-rozhikov indlela eshushu yokubusika kwamathini: iresiphi ngesithombe
I-rozhiki enomlilo-isisitye esiluncedo nesinomhlwa, esoloko sinceda abanini kwixesha elibusika elinzima kunye nexesha elilukhuni lweLente. Ngokusetyenziswa kwazo rhoqo, i-metabolism ikhawuleza kwaye amehlo kunye nesimo seenwele kunye nesikhumba ziphucula. Ukumisa i-rozhikov indlela eshushu kwiibhanki ebusika ayinayo izakhono ezizodwa. Umyalelo olula wezinyathelo kunye nesitoreji ukwanele ukuphepha iimpazamo eziqhelekileyo.
Izithako zokupheka kwesiliti eshushu
amancinci amancinci - 1 kg
ityuwa yamatye - 7 g
amanzi okusela - 150 ml
i-citric acid - 1.5 g
Umyalelo wendlela yokuhamba ngeyiteyathelo indlela yokuthabatha i-redheads ebusika
Susa ama-mushroom amancinci kwi-debris, hlambulula kwaye uyomile.
Amanzi ngetyuwa kunye ne-citric acid, thumba, faka i-rozhiki elungiselelwe kwi-brine.
Pheka ama-mushroom kwisixhobo samanzi esetyuwa imizuzu eyi-15-20 emva kokubilisa. Ukutshintshwa kushushu kwiimbiza. Gcwalisa i-brine ecocekileyo.
Gqithisa isitya esinezikhonkwane zetsimbi. Vula izimbiza phezulu phezulu. Emva kweveki ezimbini, unokuzama ama-mushroom.
Indlela yokwenza ityuwa ebomvu ngamakhowe ebusika emanzini ngendlela eyomileyo, iresiphi
Uhlobo lwe-Pickling ebomileyo yinkqubo yokuzonwabisa, kunye nobunzima bezinto ezinobunzima. Ngokomzekelo, inani leetyuwa elitye, elisetyenziselwa ngokomyalelo, ngokuthe ngqo kuxhomekeke ekugcinweni kwamakhowe anobisi. Yaye ubukho okanye ukungabikho kwemvelo kunye neziqholo kungatshintsha kakhulu ingcamango yekhenkethi yebukhosi ebusika. Njengoko ubona, nangona sikhokelo sendlela enye yokutya, kunokwenzeka ukuhlukanisa iintlobo ezininzi zeesitya ezilungiselelwe.
Izithako zokufumana iresiphi yokutyumba ebusika
amakhowe aphindaphinda - ibhakethi eli-1
ityuwa - 1.5 tbsp
imbewu yefennel - 50 g
Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo seresiphi yokukhetha amakhowa omileyo ebusika
Hlela amakhowe uhlambe uze uphonsa kwi-colander, ukuze i-liquid excess ishiyiwe.
Ngaphantsi kwesiqulatho esinzulu esityebileyo, galela ityuwa encinci kunye nembewu yedill. Phezulu umgca weebomvu ngeempuphu phezulu. Nciphisa uluhlu lwamakhowe ngeetyuwa kunye nesipuni. Qhubeka ubeka uluhlu kuze kube yilapho ama-mushroom aphelile.
Ngebunzima obuqiniweyo obunamathele, uphonsa umgca we-gauze kunye nesitapu esicubileyo, ukusuka phezulu ufake ifayile ye-3-litre yamanzi. Yishiye isikhephe kwindawo epholileyo iiveki ezimbini.
Emva kweentsuku ezimbini, zenze iifoto zibe zizintambo ezinobumba, zifake amaqabunga amaqabunga kunye nezibonda ezininzi. Fihla ama-mushroom kwifriji yokugcina.
Unokwenza njani ityuwa i-rozhiki ebanda kwiitini nge-brine, iresiphi yevidiyo
Indlela yokubanda e-rokhikov kwiibhanki-ukhetho lwehlabathi jikelele. Ukulungelelwa ngale ndlela iikhowe ziyakuncwatshwa, zinywe, zongezwe kwiisobho, i-sauces kunye nee-marinades, kwaye zisebenze njenge-snack elula yokutya. Ngenxa yokungabikho kwonyango lwamaxesha omlilo, i-rozhik igcina i-chemical composition, kwaye ngoko ke izakhiwo zabo ezincedo ziyabhubha, kodwa zanda nje ngexesha. Indlela yokwenza ityuwa i-rozhikov ebanda kwiinqanawa nge-brine, bona iresiphi yevidiyo.
Indlela yokucoca iintlanzi ebusika kwimikhonkco - umyalelo wokuvuna
Ukuhlamba ama-mushroom ebusika kuyakufuneka ufufume ngaphantsi kwesitofu. Kodwa umphumo wokugqibela uza kulungisa zonke iimbutho ezilahlekileyo kunye neeyure ezixabisekileyo. Kwinqanaba lama-mushroom amancinci ane-acidity elula, efafazwe nge-anyanisi eluhlaza okanye i-anyanisi enobumba - yintoni enye ingcono kunokuba i-snack yamasiko ayithandayo?
Izithako zokufumana i-recipe yokutshiza ama-mushroom ebusika
i-rozhiki - 2.5 kg
igalikhi - amazinyo amathathu
i-sweet and paprika
Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo seresiphi yokukhetha amakhowe amnyama ebusika
I-Peel kwaye uhlanza amakhowe epanini, uthele ngamanzi acacileyo uze ubilise imizuzu emi-3-5. Ukucoca amanzi.
I-rozhiki ebilisiwe yiphinde ityathele amanzi atshisayo ngetyuwa (1 tsp) kunye ne-citric acid (0.5 tsp). Ukupheka ubuninzi ngomnye umzuzu 20-25 uze uyilahle kwi-colander.
I-anyanisi kunye negalikhi ikhuphe i-husk, ihlambulule kwaye igalelwe emacongeni.
Ukulungiselela i-marinade, ubilise emanzini kwipuphu ye-koqweqwe lwe-eamel kunye noshukela, ityuwa kunye neziqholo. Faka ama-mushroom ngokubilisa amanzi kwaye uqhubeke nokupheka enye imizuzu engama-20-25. Imizuzu emi-2 ngaphambi kokuphela, engeza iviniga kwi-pan.
Ngezimbiza zetekisi eziyinyumba, tshintsha ama-mushroom, wongeze i-anyanisi kunye negalikhi, uthele i-marinade kwi-pan. Gqithisa isitya esinezikhuselo ezinamanzi.
Ukwazi indlela yokucoca i-redheads ngendlela ebandayo neyushisayo, indlela yokubahamba ngayo ebusika, awuyi kuze ushiywe ngaphandle kokutya okufanelekileyo. Iipiya ziya kuhlala zigcwele ukugcwalisa i-mushroom, kunye ne-sauces - kunye neziqhekeza ezinqabileyo kunye ne-rozhikov engavumelekanga.
Indlela yokucoca ibhakoni: iindlela ezintle zokukhetha
Indlela yokuncenkceshela amathanga okulondolozwa ekhaya: kwi-microwave, i-oven, multivark
Amakhukhamba e-Crispy ebusika - zokupheka kwiimbiza ezilona, ​​ngaphandle kokuzalisa inzalo, kunye ne-vodka, i-citric acid. Indlela yokucoca okanye ukuthaka ukhukhamba otyumkileyo ebusika
Abasetyhini abahlala eRashiya benza okuphindwe kabini okanye kathathu ukukhipha isisu
Ipaki yamathambo ayiphuli: indlela yokugqoka kunye nokokugqoka ipaki, ifoto
I-Bézé (i-meringue) ngamantongomane
Funda isiNgesi kuwe
Ulwimi nolwimi lomzimba